Author Topic: ကိုကိုထွန်းအေးတင်တဲ့ဟာသများ (Read 247604 times)
« Reply #410 on: July 30, 2011, 09:47:21 AM »
" ယာဉ် ထိန်း ရဲ ကို ချူ ချာ "
မိန်းမချော တစ်ယောက် မောင်းလာသည့် ကားကို ယာဉ်ထိန်းရဲ ကိုချူချာ
ရပ်ခိုင်းလိုက်သည် ။ ကားအနားသို့ကပ်သွားပြီး အမျိုးသမီးကို ပြောသည်။
" ယာဉ်မောင်းလိုင်စင် ကြည့်ပါရစေ "
" ဘာလိုင်စင်လဲ....ရှင် ဘာကို ပြောတာလဲ.. "
" ဟိုဟာဗျာ.. ခင်ဗျား ဓါတ်ပုံပါတဲ့ဟာလေ.. "
အမျိုးသမီး လက်ကိုင်အိတ်ကို ဖွင့်သည် ။ အထဲမှ ကြည့်မှန်ကို ထုတ်ပြီး ရဲ
ကို လှမ်းပေးသည် ။ ကိုချူချာ မှန်ကို ယူကြည့်သည် ။ ချက်ချင်း ပြန်ပေးပြီး
အလေးပြုကာ တောင်းပန်စကား ပြောသည် ။
" ခင်ဗျားလဲ ရဲသား ဆိုတာ စောစောက ပြောရောပေါ့... "
« Reply #411 on: July 30, 2011, 10:09:12 AM »
" အ ရာ ရှိ ကြီး ကို ချူ ချာ "
ကိုချူချာ ငါးမျှားနေသည် ။ သူ့ ဘေးမှာ မိထားသော ငါးတွေ တစ်ပုံကြီး ။
လူတစ်ယောက် ရောက်လာပြီး ကိုချူချာကို ပြောသည် ။
" ဟေ့...ချူချာ.. င့ါကို ငါးနည်းနည်း ပေးပါလားကွ ဟေ "
" မရဘူး.... အရာရှိကြီး ဆူလိမ့်မယ်. "
" အရာရှိကြီးက ဘယ်သူလဲ "
" ကျုပ်ပဲ "
" အရာရှိကြီး ခင်ဗျာ.. ကျနော့်ကို ငါးနည်းနည်းလောက် ပေးပါလား ဟင် .. "
" ကြိုက်သလောက် ယူသွား... "
« Reply #412 on: July 30, 2011, 10:33:51 AM »
" သ တ္တိ ခဲ "
လင်မယား နှစ်ယောက် အိပ်ရာထဲ အိပ်နေကြသည် ။ ရုတ်တရက် အနံ့ ဆိုး ရသဖြင့်
မိန်းမဖြစ်သူ အိပ်ရာမှ နိုးလာသည် ။ ယောင်္ကျား၏ ကိုယ်ပေါ်မှ စောင်ကို ခွါလိုက်ရာ
အိပ်ရာထဲ အီအီး ပါချထားသည်ကို မမျှော်လင့်ပဲ တွေ့ လိုက်ရသည် ။ နှာခေါင်းပိတ်ပြီး
ယောင်္ကျား၏ ပါးနှစ်ဖက်ကို ရိုက်နှိုးသည် ။ " ဒီအရွယ်ကြီးရောက်မှ အိပ်ရာထဲ အီအီး
ယိ်ုအုန်း..ယိုအုန်း. " ဟု ပြောကာ ယောင်္ကျားကို ထုထောင်းသည် ။ မိန်းမ၏ လက်နှစ်
ဖက်ကို ဆုတ်ကိုင်ရင်း ယောင်္ကျားက ရှင်းပြသည် ။
" ငါ ရှင်းပြတာ နားထောင်ပါဦးကွာ..ဒီလိုကွ.. ငါ အိပ်မက်ဆိုးကြီး မက်နေတာ..၊ တောနက်
ကြီးထဲမှာ ငါ တစ်ယောက်တည်း လမ်းလျှောက်နေတယ်.. ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိရှိသမျှအရာ
ခပ်သိမ်း အသက်ရှိနေတယ်လို့ထင်ရတယ်.. ၊ သစ်ကိုင်းသစ်ခက်တွေက ငါ့ မျက်နှာကို
လှမ်းရိုက်တယ်..၊ လေက တရှဲရှဲနဲ့ငါ့ အနားက ဖြတ်တိုက်တယ်..၊ ရုတ်တရက် ယိမ်းက
သလိုဖြစ်နေတဲ့ ချုံပုတ်တွေနောက်က ကျား ၊ ခြင်္သေ့ နဲ့ဝက်ဝံ သုံးကောင် ငါ့အပေါ်ကို
မိန်းမဖြစ်သူ သက်ပြင်းချပြီး မှတ်ချက်ပေးသည် ။
" ဟုတ်ပါရဲ့ တော်.......ကျမသာဆိုရင် ကြောက်တာနဲ့နေရာမှာတင် အသကင်ထွက်သွားမှာ
ယောင်္ကျားဖြစ်သူက ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားသံဖြင့် ပြောသည် ။
" ငါက ယောင်္ကျားပဲကွ... သေလို့ ဖြစ်မလား.. "
« Reply #413 on: July 30, 2011, 11:04:50 AM »
" တုန့်ပြန် စ ကား "
အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ အသက် ခြောက်ဆယ်ပြည့် မွေးနေ့ ပွဲ အခမ်းအနားကို ဟော်တယ်ကြီး တစ်ခုတွင်
ကျင်းပသည် ။ ဖိတ်ကြားထားသော ဧည့်သည်တော် နှစ်ရာ ခန့်တက်ရောက်လာကြသည် ။ ဇွန်းသံ
ခက်ရင်းသံ စကားပြောသံတွေကြားမှ ချောင်းဟန့် သံပေးပြီး အမျိုးသမီးကြီး၏ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ နေရာမှ
" မ်ိတ်ဆွေများ ခင်ဗျာ.. ကျနော့် ချစ်ဇနီးရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက် " တို့ စ် " လုပ်ပါရစေ...။
မိန်းမရေ... အသက် နှစ်ဆယ် အရွယ်တုန်းက မင်းဟာ စွဲမက်စရာကောင်းတဲ့ ပန်းကလေး တစ်ပွင့်နဲ့တူ
ခဲ့တယ်....၊ အသက် သုံးဆယ် အရွယ်မှာ မင်းဟာ ရှန်ပိန် အရက်နဲ့တူခဲ့တယ်..။ အသက် လေးဆယ် အ
ရွယ်မှာ ဈေးကြီးတဲ့ ကော့ညက် အရက်နဲ့တူခဲ့တယ်..။ အခု အသက် ခြောက်ဆယ် ပြည့်ချိန်မှာ မင်းဟာ
ဟောင်းနွမ်းယိုယွင်းနေတဲ့ စန္ဒရားအိုကြီးနဲ့တူတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်..။ ဒါပေမဲ့ မင်းကို ငါ ချစ်မြဲ ချစ်ဆဲ
တန်ဘိုးထားဆဲပဲ.... ဘာဖြစ်နေနေ မင်းအနားက ငါ တစ်ဖ၀ါးမှ မခွာဘူးဆိုတာ သိထားစေချင်တယ်. ကိုင်း
မင်းရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်.........."
ဤသို့ ပြောပြီးသည်နှင့် ခင်ပွန်းသည်ရော..ဧည့်သည်များပါ ကိုင်ထားသော ခွက်များကို မြှောက်ပြီး သောက်
မိနစ် အနည်းငယ် အကြာတွင် မွေးနေ့ ရှင် အမျိုးသမီးကြီး နေရာမှ ထသည် ။
" ကျမလဲ ကျမရဲ့ခင်ပွန်းသည် အတွက် " တို့ စ် " လုပ်ပါရစေ.....
ကိုကိုရေ... ကိုကို ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲ... အသက် နှစ်ဆယ်အရွယ်တုန်းက ကျမဟာ စွဲမက်စရာကောင်းတဲ့ပန်း
ပွင့်ကလေးနဲ့တူခဲ့ပါတယ်...ဒါပေမဲ့ ကိုကိုဟာ မွှေးလွန်းတဲ့ ပန်းကို နမ်းခဲ့ရသူ မဟုတ်ဘူး.. မှန်တယ်.. အသက်
သုံးဆယ် အရွယ်မှာ ကျမဟာ ရှန်ပိန်နဲ့တူခဲ့တယ်... ဒါပေမဲ့ ပုလင်းဖင်ကပ်နဲ့ပဲ ကိုကို တင်းတိမ်ခဲ့ရတယ်.. အ
သက် လေးဆယ် အရွယ်မှာ ကျမဟာ ဈေးကြီးပေးဝယ်ရတဲ့ ကော့ညက် အရက်နဲ့တူခဲ့တယ် ဆိုတာလဲ မှန်တာပဲ
ဒါပေမဲ့ အရက်ပုလင်းကို ကိုကို သုံးယောက်မျှပြီး သောက်ခဲ့ရတယ်...။ အခု အသက် ခြောက်ဆယ် ပြည့်တဲ့ အခါမှာ
ကျမဟာ ရှင်ပြောသလိုပဲ ဟောင်းနွမ်း ယိုယွင်းနေတဲ့ စန္ဒရားအိုကြီးနဲ့တူနေပြီ..။ ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့ အထိ ရှင် စန္ဒရား
ကျမ ယောင်္ကျားရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက် ခွက်တွေကို မြှောက်လိုက်ကြရအောင်... "
« Reply #414 on: July 30, 2011, 12:50:38 PM »
" အ ဖေ့ ကို လုပ် ကြံ ခြင်း "
( ရုရှား မိသားစုများသည် မြို့ ပြင်ရှိ တောတ၀ိုက်တွင် " ဒါချာ " ဟု ခေါ်သော နွေရာသီ
အနားယူအိမ်များကို အာဏာပိုင်တို့ ချပေးသော မြေကွက်`၌ ဆောက်လုပ်ကြလေ့ ရှိသည် ။
ပေ လေးဆယ် ၊ ခြောက်ဆယ် ခန့် ကျယ်သော မြေကွက် ဖြစ်သည် ။ အများအားဖြင့် သစ်သား
အိမ်ဖြစ်ပြီး ခြံထဲတွင် ဟင်းသီးဟင်းရွက် နှင့် သစ်သီးဝလံများ စိုက်ကြသည် ။ )
မိဘများ ရှိရာ " ဒါချာ " သို့တစ်ပတ်ကြာနေရန် သားဖြစ်သူ ရောက်လာသည် ။ ရောက်ပြီး
တစ်ရက်အကြာတွင် အဖေ့ကို ပြောသည် ။
" ခြံထဲက အဖေ့ အိမ်သာဟာ ခနောခနဲ့နိုင်လှတယ်..အမြင်လဲ မတော်ဘူး ဘေးအိမ်ကလူတွေကို
ရှက်စရာ... ဖျက်ပြီး အိမ်ထဲမှာ ရေဆွဲအိမ်သာ ကောင်းကောင်းတစ်ခု ဆောက်စမ်းပါ အဖေရာ "
" ဟေ့..မင်း ငါ့ကို ဆရာလာမလုပ်နဲ့ ..ငါ့ အိမ်သာဟာ ခြံရဲ့ အစွန်အဖျား.သစ်ပင်တွေ ကြားမှာ ဆောက်
ထားတာ..။ ပြီးတော့ ချောင်းနဲ့ကပ်လျှက်..၊ ဘယ်သူမှ မမြင်ဘူး..။ ဘယ်သူ့ ကိုမှလဲ အနှောက်
အယှက် မပေးဘူး "
" ဒါပေမဲ့ အရုပ်ဆိုးလှပါတယ် အဖေရာ.. "
" ဟေ့...ဒီအကြောင်း ငါ့ကို ထပ်မပြောနဲ့ တော့.. "
ငယ်ကြောက်ဖြစ်သဖြင့် သားဖြစ်သူ အဖေ့ကို ထပ်မပြောရဲတော့..။
ည ( ၁၂ ) နာရီခန့် တွင် သားဖြစ်သူ အိပ်ရာမှ တိတ်တိတ်လေး ထသည် ။ ခြံထဲ ဆင်းပြီး ကားကို
စက်နှိုးသည် ။ ထို့ နောက် အိမ်သာကို ကားနှင့် တွန်းသည် ။ အိမ်သာ ချောင်းထဲ ကျသွားလေသည် ။
နောက်တစ်နေ့မနက်တွင် ဒေါသထွက်နေသော အဖေက သားကို မေးသည် ။
" ညက အိမ်သာကို ချောင်းထဲကျအောင် တွန်းပစ်တာ မင်းလားကွ ဟေ "
" မဟုတ်ပါဘူး အဖေ.. "
" သား...အဖေ ပြောတာ နားထောင် ။ ကိုယ့်အမှားကို ၀န်ခံခြင်းဟာ အပြစ်ကို တစ်ဝက်လျှော့်စေသတဲ့နော်
မင်း သူငယ်ချင်း အီဗန်ကို ကြည့်..။ ခြံထဲက ပန်းသီးပင်ကို ဒင်း လှဲပစ်တယ်.။ အဲ့ဒိနောက် လှဲပစ်မိကြောင်း
၀န်ခံတော့ သူ့ အဖေက သူ့ ကို ခွင့်လွှတ်လိုက်တယ်..။ အဲ့ဒါကြောင့် မင်း ငါ့ကို မှန်မှန်ပြော..။ အိမ်သာကို
" ဟုတ်...ဟုတ်ပါတယ် အဖေ.. "
ဤစကားကို ကြားသည်နှင့် အဖေလုပ်သူ သားကို ဖြန်း ကနဲ မြည်အောင် ပါးချလိုက်သည် ။
" အဖေ ဘယ်လို လုပ်တာလဲ..။ ပန်းသီးပင် လှဲပစ်တဲ့ အီဗန်ကို သူ့ အဖေ ခွင့်လွှတ်တဲ့ အကြောင်း အဖေပဲ
" ပန်းသီးပင်ကို အီဗန် လှဲပစ်တဲ့အချိန်မှာ သူ့ အဖေက အပင်ပေါ် တက်ထိုင်မနေဘူး ကွ.... "
« Last Edit: July 30, 2011, 12:52:51 PM by tunaye2011 »
« Reply #415 on: August 01, 2011, 09:40:39 AM »
လူတွေ့စစ်မေးပွဲ..။ နာမည်ကြီး ယေးလ် တက္ကသိုလ်သို့တက်ရောက်ရန်
လျှောက်ထားလာသော နယူးရုပ်ရှင် ၏ သားကို အမေရိကန် ပါမောက္ခက
မေးခွန်း တစ်ခုပြီး တစ်ခု မေးသည် ။ ဘာမေးခွန်းကိုမျှ ၄င်း မဖြေနိုင်ချေ ။
စိတ်ပျက်လာသည်နှင့် နောက်ဆုံးတွင် ပါမောက္ခက ပြောသည် ။
" ကောင်းပြီ .... အမေရိကတိုက်ကို ဘယ်သူ ရှာတွေ့ သလဲ ဆိုတာပဲ ပြောတော့ "
နယူးရပ်ရှင် ၏ သား ပခုံးပဲ တွန့် ပြသည် ။ ပါမောက္ခ စိတ်တိုတိုနှင့် အော်သည် ။
" ကိုလံဘတ်စ်....ကိုလံဘတ်စ် "
နယူးရပ်ရှင် ၏ သား နေရာမှ ထပြီး တံခါးဘက် လျှောက်သွားသည် ။
" ဟေ့..မောင်ရင် ဘယ်သွားမလို့ လဲ.... "
" နောက်တစ်ယောက်ကို ဆရာကြီး ခေါ်တယ် ထင်လို့ ပါ.. "
« Reply #416 on: August 02, 2011, 10:13:32 AM »
" အိပ် မက် ဆိုး "
မိတ်ဆွေ နှစ်ယောက် ဆုံကြသည် ။ တစ်ယောက်က မေးသည် ။
" ဟေ့လူ ..ခင်ဗျား မျက်နှာ မကောင်းပါလား...ဘာဖြစ်လို့ လဲ.... "
" ညက အိပ်မက်ဆိုး မက်တယ်...။ သဇင်.. ၀တ်မှုံရွှေရည်.. ဖွေးဖွေး
နဲ့နောက် မိန်းမချောလေး သုံးယောက် လေ..။ ကျုပ်ကို သူပိုင်တယ်..
ငါပိုင်တယ်ဆိုပြီး ကျုပ်မိန်းမနဲ့ငြင်းကြရင်း.. ရိုက်ပွဲကြီး ဖြစ်သွားတယ်ဗျာ.."
" ဘယ်လို အဆုံးသတ်သွားသလဲ... "
" ကျုပ်မိန်းမ အနိုင်ရသွားတယ်ဗျာ... တောက် "
« Reply #417 on: August 03, 2011, 03:15:35 PM »
" ယဉ် ကျေး မှု သင် တန်း "
သူငယ်ချင်း အမျိုးသမီး နှစ်ယောက် ဆုံကြရာ တစ်ယောက်က မိမိ အကြောင်းကို ပြောသည် ။
" တစ်လောက သူဌေးတစ်ယောက်နဲ့အိုင် ချိတ်မိတယ်...။ ပိုက်ဆံ ပေါသလား မမေးနဲ့..မြို့ 
လယ်ခေါင်မှ တိုက်ခန်း သုံးခန်း..၊ မြို့ ပြင်မှာ ခြံနဲ့ဝင်းနဲ့တိုက် ငါးလုံး.... "
သူငယ်ချင်းက ပြန်ပြောသည် ။
" ယူ့ ကို အားကျလိုက်တာနော်... "
ပထမ အမျိုးသမီး ဆက်ပြောသည် ။
" ကားကလဲ ခြောက်စီးတောင်...တစ်နေ့ ကပဲ အိုင့်က်ို " ဖာရာရီ " တစ်စီး လက်ဆောင်ပေးတယ် "
" မနက်ဖြန် ကာရစ်ဘီယံ ပင်လယ်ဘက်ကို သူနဲ့အတူ ခြောက်လကြာ ခရီး ထွက်မယ်..၊ အဲ့ဒီက
ကျွန်းတစ်ခုခုကို ၀ယ်ပြီး အနားယူ ဇိမ်ခံဘို့ အတွက် အိမ်ကြီးကြီး တစ်လုံး ဆောက်ချင်သတဲ့ "
" ယူ ကလဲ အားကျတာချည်း ပြောနေတယ်...ယူ့ အကြောင်းလဲ ပြောပြပါဦး "
" သြော်...အင်း.. တစ်လောကပဲ " အိုင် " ယဉ်ကျေးမှု သင်တန်း ဆင်းခဲ့တယ်.. "
" ယူတို့ ကို ဘာတွေ သင်ပေးသလဲ ဟင်.. "
" ကောင်မ.....ပါးစပ် ပိတ်ထားစမ်း ဆိုတဲ့အစား အားကျလိုက်တာနော် လို့ပြောတတ်အောင်
« Reply #418 on: August 03, 2011, 03:38:19 PM »
" စ ကား ပြော မှား သွား ခြင်း "
မိန်းမက ယောင်္ကျားကို မေးသည် ။
" ကျမ သေရင် ရှင် ဘာလုပ်မလဲ ဟင် "
" ငါ ရင်ကွဲပက်လက် ဖြစ်ကျန်ရစ်မှာပေ့ါ..။ မင်း ဘာဖြစ်လို့မေးတာလဲ.... "
" ရှင် နောက်မိန်းမ ယူမှာလား ဟင်.. "
" မယူဘူး.. "
" ဘာဖြစ်လို့ လဲ... အိမ်ထောင်သည် ဘ၀ကို ရှင် မကြိုက်လို့ လား.. "
" မကြိုက်ဖူး မဟုတ်ပါဘူး...ကြိုက်ပါတယ်... "
" အဲ့ဒါဆို ဘာဖြစ်လို့နောက်မိန်းမ မယူဘူးလို့ပြောတာလဲ.... "
" အေး..အေး ယူမယ်ကွာ...ယူမယ်... "
ဆွေးမြေ့ သောမျက်လုံးများဖြင့် အဝေးတစ်နေရာသို့ကြည့်ပြီး မိန်းမဖြစ်သူ
" နောက် မိန်းမ ယူမယ်နော်.. "
မိနစ် အနည်းငယ်မျှ တိတ်ဆိတ်နေပြီးနောက် အမျိုးသမီး ဆက်မေးသည် ။
" ကျမတို့အိပ်ရာမှာ ရှင် သူနဲ့ အတူတူ အိပ်မှာပေါ့နော်... "
" ဖြစ်နိုင်ပါတယ်.. "
အေးစက်သော လေသံဖြင့် မိန်းမဖြစ်သူ ဆက်မေးသည် ။
" ဖြစ်နိုင်တယ် မဟုတ်ဘူး....သေချာပါတယ်..၊ ဒါနဲ့ကျမရဲ့ဝတ်စုံအသစ် သူ့ ကို
ပေးဝတ်မှာလား ဟင် "
" အသစ်ကြီးပဲ...လိုအပ်ရင် ပေးဝတ်ရမှာပေါ့.. "
အမျိုးသမီး၏ လေသံက ယခင်ကထက် အေးစက်လာသည် ။
" ကျမရဲ့ဓါတ်ပုံကို ဖြုတ်ပြီး သူ့ ဓါတ်ပုံကို ထောင်ထားမှာပေ့ါနော်.. "
" အင်း....ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တဲ့ ကိစ္စပဲ မဟုတ်လားကွာ.. "
အမျိုးသမီး ဖြုန်းကနဲ မတ်တပ်ရပ်လိုက်သည် ။
" ဘာလဲ..ကျမ တစ်ခါမှ မစီးရသေးတဲ့ အီတလီမိတ် ဖိနပ်ကိုလဲ ပေးစီး
" ဟင့် အင်း.. သူ့ ခြေထောက်နဲ့မင်းခြေထောက် နံပါတ်ချင်း မတူဘူးကွ "
« Reply #419 on: August 04, 2011, 09:30:50 AM »
" အ တိတ် နိ မိတ် "
အဖေက သားကို မေးသည် ။
" ဟေ့..သား..၊ မင်းမိန်းမ မွေးတဲ့ ကလေးက အသားမည်း နီဂရိုးလေး ဖြစ်နေပါလားကွ.. "
" ကလေးကို မမွေးခင် နီဂရိုး တစ်ယောက်ကို အိပ်မက် မက်တယ်လို့ကျနော့် မိန်းမက
ပြောတယ် အဖေ.. "
အဖေ ဖြစ်သူ ၄င်း၏ မိန်းမဘက်( သား၏ အမေ ဖြစ်သူဘက် ) လှည့်မေးသည် ။
" ဟေ့.. မိန်းမ ၊ မင်းရော..သားကို မမွေးခင် ငထုံ ၊ ငအ တစ်ကောင်ကိုများ အိပ်မက်
မက်သေးလားကွ ဟေ.. "